Beesha Caalamka: “Shirka Golaha wada-tashiga Qaran waa fursad muhiim ah oo ay waajib tahay in aan la luminin” – Kalfadhi
Beesha Caalamka: “Shirka Golaha wada-tashiga Qaran waa fursad muhiim ah oo ay waajib tahay in aan la luminin”
May 22, 2021 Hassan Istiila
Beesha Caalamka ayaa taageero xoog leh u muujisay shirka Golaha wada-tashiga ee arrimaha doorashooyinka, kaas oo maanta ka furmaya magaalada Muqdishu.
Shirka oo ay ka qeyb-galayaan madaxda dowlad-goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir iyo dowlada federalka ayaa looga hadli doonaa khilaafka hareeyay heshiiskii 17-ka September iyo qodobadii kasoo baxay shirkii Baydhabo.
Beesha Caalamka ayaa dhinaca kale sheegtay in shirka ay u aragto in uu yahay fursad muhiim ah oo ay waajib tahay in aan la luminin si loo horumariyo nabadda iyo amniga Soomaaliya.
“Waxaan ku bogaadinaynaa Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble qabashada shirkan waxaana rajeynaynaa in uu sii hoggaamin doono geedi-socodka doorashada, oo ay ku jirto amniga doorashada.”ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Beesha Caalamka.
Sidoo kale Beesha Caalamka ayaa soo dhoweysay ballanqaadka madaxda dowlad goboleedyada eeka qeybgalka shirka si shuruud la’aan ah. Ugu dambeyntii Beesha Caalamka ayaa ugu baaqday dhamaan madaxda DFS iyo DGXDF inay sameyaan tanaasul wax-ku-ool ah si heshiis dhakhso leh loo gaaro.
Shirka Golaha Wada-tashiga Qaran ee arrimaha doorashooyinka oo maanta ka furmaya Muqdisho
Guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta oo kulan looga hadlay doorashada la yeeshay madaxweyne Laftagareen